Company - Hebei Samsung Metal Wire harato Co., Ltd
Anping Sanxing Wire harato Factory niorina tamin'ny taona 1990, izay matihanina mpanamboatra ny welded tariby harato ,welded tariby harato tontonana ,misy lafiny enina tariby harato ,rojo rohy fefy , crimped wire mesh, Stainless vy tariby harato ,fencing netting ,nitarina metaly harato , varavarankely lamba , galvanzied-joro tariby harato , fiberglass mesh , makarakara harato , fefy tariby , hareza fefy tariby , mainty annealed tariby , cut wire etc. Ny vokatra dia be ampiasaina amin'ny orinasa, fambolena sy fiompiana, fambolena, fanorenana, ny fitaterana sy ny fitrandrahana. By izao no efa manjaka barotra fifandraisana amin'ny mpanjifa 45 avy any Azia Atsimo-Atsinanana, Azia, Eoropa, Moyen-Orient, Afrika, ary efatra heny ny vola sy ny varotra isan-taona ny mpanjifa.
Misy 5 sampana orinasa maka 19000 metatra toradroa, 165 mpiasa mahay sy fahaiza-taonina 10000 isam-bolana mba hiatrehana baiko boky hafa.
Manana ekipa varotra tonga lafatra amin'ny toetra fototra ny tompon'andraikitra mpanjifa, tsy mijanona dian'ny ny fikatsahana ny fandrosoana, ary manome varotra tsara rehefa avy-fanompoana. Mihoatra ny 15 oversea varotra miteny anglisy sy manana mihoatra ny 4 taona eo ho eo miasa traikefa avy.
Ny 20 fampandrosoana tehina maherin'ny 10 taona eo ho eo dia afaka ny hanana 5 vokatra vaovao isam-bolana. Voalohany indrindra ny birao ampitan-dranomasina nanangona infomantion-barotra ary avy eo isika hanana vokatra vaovao izay miendrika fangatahana tsena.
ISO 9001, ISO14001 sy SGS certifiedOur tsara mifanaraka amin'ny rafitra fitantanana ny ISO 9001, ISO14001 sy SGS tari-dalana ary mijery ny dingana tsirairay eo amin'ny dingana famokarana. Izahay hividianana akora avy amin'ny orinasa fanta-daza ao Shina, ka vangio fitaovana alohan'ny warehousing. Ny 6 fitaovana fanaraha-maso ny Quality Deparment bings tamin'ny 6 maso fitaovana sy mitarika fisafoana mialoha fanaterana ny vokatra farany.
Matoky isika eo amin'ny vokatra soa ny fampisehoana sy ny faverable vidiny. Tsy miraikitra amin'ny 4 fitsipiky ny kalitao, vidiny, tsy fivadihana sy ny fanompoana izay ampiharina tsy tapaka nandritra ny varotra.